नियमित लयमा फर्किने प्रयासमा संसद्, बजेट अधिवेशन बोलाउन माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नियमित लयमा फर्किने प्रयासमा संसद्, बजेट अधिवेशन बोलाउन माग
बजेटबारे छलफल गर्ने तयारीमा अर्थ समिति, लेखाले थाल्यो स्वास्थ्‍य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिताको छानबिन
वैशाख १६, २०७७ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड - १९)को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले पटकपटक लकडाउन थपरिहेको र कडा बनाउने भनिरहेका बेला संसद सचिवालयमा भने बिस्तारै चहलपहल बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय संसद सचिवालयमा सांसद र कर्मचारीको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ ।
गत चैत पहिलो साता कोरोना भाइरसको त्रासका कारण संसदीय समितिका बैठक लगायतका नियमित गतिविधिमा ब्रेक लगाएका संसदीय समितिका बैठकहरू बस्न थालेका छन् । लकडाउनका क्रममा पनि संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउनेमा राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिमा अगाडि छन् । यसबीचमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका ४ समितिमध्ये तीन समितिका बैठक बसिसकेका छन् । बैठक नबसेको समितिले पनि मंगलबार बैठक बोलाएर लकडाउन पहिले छुटेको लय समात्ने तयारीमा छ ।
बैशाख ८ गते नै बैठक बोलाएको विधायन व्यवस्थापन समितिले नियमित काम थालेको छ । यो समितिले आइतबारबाट विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अब नियमित काममा संसद लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए । 'कोरोना संक्रमणको डर त छैन, सचेतता पनि अपनाइरहेका छौं,' उनले भने, 'आफ्नै सवारी साधन नहुने माननीयहरूलाई संसद सचिवालयले आउने जाने व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।' संसदीय समिति सांसदहरूबीच दूरी कायम गरेर बसिरहेको छ । सांसदहरूलाई ल्याउनक लागि भने सभापति गुरुङले आफ्नै गाडी पठाउने र अन्य व्यवस्था गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा सांसद संख्या कम भएकाले पनि बैठक बस्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।
संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनको ५७ वर्षपछि मापन मूल्यांकन हुँदै
विधायन व्यवस्थापन समितिमा निति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ माथिको दफावार छलफलमा सहभागी भइरहेका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले समितिको बैठक मंगलबार १ बजे बोलाएका छन् । 'सांसदहरूबीच दूरी कायम गरेर, मास्क लगाएर र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेर बैठक बस्ने तयारी गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कोरोनाको डर सकिन लागिसक्यो ।'
गत शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समिति बैठक बसेका थिए । दुवै समितिले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले चालेका कदम, त्यसले विकास निर्माणका काम परेका प्रभावबारे छलफल गरेका थिए । सरकारलाई कोरोना संक्रमणको प्रभाव बढी भएको ठाउँमा लकडाउनमा कडाइ गर्न र नभएका ठाउँलाई सुरक्षित किसिमले खुला गर्दै जान सुझाव तथा निर्देशन दिएका थिए ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले समिति बैठकलाई अब निरन्तरता दिने बताइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम रोकिँदा विकासको गति नै रोकिएकोले पनि सरकारलाई ती काम पुनः सुरु गर्न भन्नका लागि पनि समिति सक्रिय हुने उनको भनाइ थियो । उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको डर सांसदहरूमा नरहेको बताइन् । लामो समय लकडाउन भएको र नेपालमा संक्रमण नदेखिएकाले अब बिस्तारै नियमित काममा फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटबारे छलफल गर्ने तयारीमा अर्थ समिति, लेखाले थाल्यो छानबिन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू पनि आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाउन थालेका छन् । लकडाउनकै बेला भर्चुअल बैठकसमेत गरेका प्रतिनिधिसभा मातहतका समितिले सरकार काममाथि निगरानीलाई बढाएका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैशाख २ गते बसेको भर्चुअल अबैठकले चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन, परीक्षणलाई तिव्रता दिन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेकाको व्यवस्थापन, विपन्न परिवारलाई राहत, कोरोना भाइरसको संक्रमण बाहेकका बिरामीको उपचार, राहत वितरणमा भएका अनियमितता रोक्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगमा ल्याउन, फ्रन्ट लाइनमा खटिने व्यक्तिहरूको उचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अब तत्काल भने बैठक बस्न सम्भव नभएको बताइन् । लकडाउनको २५ गतेसम्म रहेकाले सांसदहरू बैठकमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 'जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट नै सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी भइरहेको छ । सचेतता अपनाउन र आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ, समिति बैठक लकडाउन नखुलेसम्म बस्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भनिन् ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे लकडाउनका बेला नै भर्चुअल बैठक बसेको अर्थ समितिले प्रत्यक्ष बैठक बोलाउने तयारी थालेको छ । जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसपहिले नै प्रि-बजेट छलफल गर्ने परम्परा छ । त्यसका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा बैशाख १५ लगत्तै बजेट अधिवेशन बोलाइने गरिन्थ्यो । यसपालि भने कोरोना भाइरसको त्रासले बजेट अधिवशेन कहिले आह्वान गर्छ सरकारले भन्ने निश्चित छैन । तर अर्थ समितिले भने अबको बजेटको दिशा के हुने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने तयारी थालेको छ ।
सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, 'बजेट अर्थ समितिको सरोकारको विषय भएकाले सांसदहरूले छलफलको लागि बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा जिज्ञासा राख्न थाल्नुभएको छ । कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव गहिरो छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको दिशा कसरी निर्दिष्ट गर्ने ? सरकारलाई कस्तो सुझाव दिने ? भन्नेबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सांसदहरूको कुरा छ ।' कोरोनाको प्रभाव नेपालमा कम रहेकाले अबको लकडाउन अवधि सकिएपछि बजेट अधिवेशन बोलाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण बढेमा भने बजेटबारे भएको संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्पबारे सोच्न सकिने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा बजेटमाथिको पूर्व छलफल छोटो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसपहिले समितिमा पनि बजेटबारे छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भने सरकारले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ७ दिनको म्याद दिएर पत्र काटिसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति समिति सभापति भरतकुमार शाहले अन्य विषयमा छलफल गर्ने अवस्था नरहेकाले अनियमितता लगायतका विषयमा अनुसन्धान थालेको बताए ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
विकास तथा प्रविधि समितिले १७ गते बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिमा विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डा थाती रहेका छन् । त्यस्तै, कोरोनाका कारण राष्ट्रिय गौरवका परियोजना निर्माणमा प्रभाव परेकोलगायतका विषयमा पनि छलफल सुरु गर्न लागिएको बताइन् । विकास निर्माण, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव परेकाले ती क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन समितिले पहलकदमी लिने उनको भनाइ थियो ।
कोरोनाको प्रभाव कम भइरहेको अवस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था अपनाएर संसदीय समिति बैठक बस्नुपर्नेमा अधिकांश सभापतिहरूको एकमत छ । सरकारलाई संसदीय समिति बैठक नबसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको भन्दै एक सभापतिले विकास निर्माणका काम, अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न र सरकारी निकायबाट हुने अनियमिततामाथि संसदीय अंशुक लगाउनका लागि भएपनि संसदीय समितिले काम अगाडि बढाउनुपर्ने एक सभापतिले बताए ।
संसद अधिवेशन बोलाउन माग, सचिवालयको तयारी पूरा
समिति सभापतिहरूले बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । आवश्यक सुरक्षा सचेतता अपनाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सभापतिहरूले बताएका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति गुरुङले संसद अधिवशेन बोलाउनुपर्ने बताए । आवश्यक सुरक्षा सचेतता अपनाउँदै संसद अधिवेशन नै आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सवारी साधन नहुने सांसदहरूलाई आउजाउ गर्नका लागि संसद सचिवालयले व्यवस्थापन गरेर बैठक आह्वान गर्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशका संसदहरू नियमित काममा लागिरहेको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'लकडाउन भएको पनि एक महिना बितिसकेको छ । घरमै बसेको सांसदहरूलाई पनि त्यति समय भइसकेको छ । अब आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरेर बैठक बोलाउनुपर्छ ।'
अर्थ समिति सभापति दाहालले पनि संसद अधिवेशन बोलाउदा हुने बताए । उनले बजेट अधिवेशन छिटो बोलाएर संसदीय गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्री-बजेट छलफलका लागि छोटो समय दिएर भएपनि अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले संसद अधिवेशन बोलाउने समयलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवनमा आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको बताए । सांसदहरूलाई निश्चित दूरीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । दुई सांसदको बीचमा एक कुर्सी खाली राखेर बस्ने र अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ १०:४०
कोरोना संक्रमितको संख्या ३० लाखभन्दा बढी, करिब ९ लाख निको भए
मृतकको संख्‍या २ लाख ११ हजार १५९
वैशाख १६, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) बाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या ३० लाखभन्दा बढी पुगेको छ । अमेरिकाको जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयको कोरोना भाइरस रिसोर्स सेन्टरका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ३० लाख ४१ हजार ७ सय ६४ पुगेको छ ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म २ लाख ११ हजार १ सय ५९ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ८ लाख ९३ हजार ९६७ जना निको भएको पनि सेन्टरले जनाएको छ ।
पुष्टि भएकामध्ये करिब एकतिहाई संक्रमण अमेरिकामै देखिएको छ । मंगलबार बिहानसम्म अमेरिकामा संक्रमितको संख्या ९ लाख ८८ हजार १ सय ९७ पुगेको छ । मंगलबार बिहानसम्म अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५६ हजार २ सय ४५ पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या एक ला ११ हजार ५ सय ९ रहेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा मात्रै १७ हजार ५ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी स्पेनमा २ लाख २९ हजार ४ सय २२ जनामा संक्रमण देखिएको छ । स्पेनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २३ हजार ५ सय २१ रहेको छ । त्यस्तै इटालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख ९९ हजार ४ सय १४ रहेको छ भने २६ हजार ९ सय ७७ को मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मंगलबार बिहानसम्म फ्रान्समा २३ हजार २ सय ९३, बेलायतमा २१ हजार ९२, बेल्जियममा ७ हजार २ सय ७, जर्मनीमा ६ हजार एक सय २६, इरानमा ५ हजार ८ सय ५, ब्राजिलमा ४ हजार ६ सय ३, नेदरल्यान्ड्समा ४ हजार ५ सय १८ र चीनमा ४ हजार ६ सय ३७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनमा भने केही दिनयता कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छैन । त्यस्तै संक्रमण पनि नियन्त्रणउन्मुख रहेको छ । चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले दिएको जानकारीअनुसार सोमबार ६ जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ १०:०३